Somalia: Kaluumeysato u dhalatey dalka Iran oo ka baxsadey Dekadda Bosaso - Wargane News
Home Somali News Somalia: Kaluumeysato u dhalatey dalka Iran oo ka baxsadey Dekadda Bosaso
Waxaa habeenimadii xalay ka baxsatay Dekeda weyn ee magaalada Boosaaso mid kamid ah shan doonyood oo dhawaan ay soo qabteen Ciidanka Badda Puntland.
Doonida baxsatay oo ay la socdeen dhammaan shaqaalihii saarnaa ayaa dhalasho ahaan kasoo jeeda dalka Iraan, waxaana la sheegay iney taas u sahashay kadib markii ay ka dageen Ciidankii ilaalada ka ahaa shaqaalaha iyo doonida, lama oga sababta ciidanku uga degeen doonta. Wararku waxay sheegayaan in Doonta lagu shubey shidaal ku filan oo ay ku baxsan karaan.
Doonta iyo shaqaalaha saaran ayaa dhawaan laga soo qabtay degmada Qandala ee gobolka Bari, waxaana arrinta baxsadka ah la ogeyn illaa hadda cidda u suurtagelisay doonidan.
Maxaabiista lagu soo qabtey kalluumeysiga sharci darada ah ama jariifka, ayaa lagala baxay xabsiga waxaana la dejiyey mid kamid ah Hoteelada ugu qaalisan Bosaaso, kadib markii warkaasi soo baxay ayaa dib loogu celiyey dekadda waxaana la saarey doontooodi, halkaas oo ilaalo lagaga hayey. Ciidanka ilaalada ka ahaa ayaa ka degey isla habeenkii xalay markii ay baxsanayeen kaluumeystada Iran u dhashey ee mudada ku xirnaa Bosaso, iyaga oo aan la soo taagin wax Maxkamad ah.
Kadib waxaa dekadda Bosaso laga maqley rasaas badan oo ay rideen ciidanka Baddan kuna rideen doonta baxsatey.
Wasiirka Dekadaha iyo Gadiidka Puntland oo ka hadley arrintan ayaa ku tilmaamey dooni si sharci darro ah uga baxdey dekadda, waxaana uu sheegay in ciidanka Baddu ay xabadeeyeen, waxaana rasaasta ciidanka ku rideen doonidan uu Wasiirku ku tilmaamey masluuyiad darro ah!
Wasiirka oo la weydiiyey in markii hore lagu eedeeyey kaluumeystada baxsatey in ay yihiin denbilayaal sababta keentey in ay baxsadaan ayaa sheegay, in arrinta doonta la weydiiyo Wasaaradda Kalluumeysiga. “…iyaga ayaa haya dhamaan waraaqahooda wax ay anaga nagu soo wareejiyeen ma jirto…” ayuu yiri Wasiirka.
Mid kamid ah ganacsatada xiriirka lalahaa doonta baxsatey oo lagu magacaabo Siciid Guul ayaa ku doodaya in Doonyahan ay sharci ka haysteen Puntland oo ay u soo xareyn jireen Canshuur, laakiin wuxuu sheegey in Wasaaradda Kalluumeysigu ay dooneysey lacago dheeraad ah oo baad ah, waxaana uu farta ku fiiqey Wasaaradda Kaluumeysigu in ay si sharci darro ah ku xiratey Kalumeysatadan oo ay markii horeba ogaayeen.
Maamulka Puntland ayaa ah kan keliya ee Soomaaliya ka jira oo leh ciidamo badda oo tayo leh kuwaas oo ku guuleystey in ay marar badan soo qabtaan doonyaha si sharci darro ah ku guranaya Kaluunka badaha Soomaaliya, inkasta oo ganacsato Soomaaliyeed iyo Siyaasiin kale ay awood ku leeyihiin kaluumeysiga sharci darada ah.
Ciidamada Badda ee Puntland ayaa todobaadkan kaliya soo qabtay doonyo gaaraya 8 oo lagu sheegay kuwo si sharci daro ah uga kaluumeysanayey biyaha Soomaaliya.
Madaxweynaha Puntland ayaa sanadkii 2015 ku dhawaaqey in kaluumeysiga sharci darada ah uu yahay Musiibo Qaran.